12 N'èzí mmanya echiche iji gbanwee Yard gị - PureWow - Ulo
Ejiji Agbamakwụkwọ Jụọ Ọkachamara Ọrụ & Ego Mma Techaa Ntutu Isi Ahụike Onye India Ga-Ahụ Idozi Ozugbo
12 N'èzí mmanya echiche nke ga-eme ka gị Yard gị New Favorite Hangout
.B. oyi na ikpe nke Oji ocha dị oke mma na ihe niile, mana ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ịme oriri n'azụ ụlọ gị na ọkwa ọzọ (ọbụlagodi na ọ bụ nnọkọ mmekọrịta nke otu nke otu), ọ bụ oge iji kwalite na mmanya n'èzí. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji gbanwee ahịhịa gị ka ọ bụrụ ebe ezumike, ịtọlite ​​nchegharị nke nwere ike inyere gị aka ịgbanwe site na ụbọchị ọrụ ruo ọnọdụ izu ụka ozugbo ị nwere ike iwepụta oghere oghere. Ma ị na-ọzọ nke Buy-ya ma ọ bụ Mee N'onwe Gị-ya ụdị-ma ọ bụrụ na gị na n'azụ ụlọ ohere bụ fọrọ nke nta ka ọ dịghị-anyị na-nwetara gị kpuchie. Echiche ndị a dị n'èzí bụ naanị ebe obibi ị na-achọsi ike.
Njikọ: Ihe nkpuchi 7 kacha mma maka ọgụgụ na mpụga
Echiche Balcony Bar / Etsy
1. Melite Ogwe Balcony
Naanị na ibi na ụlọ apụtaghị na ịnweghị ike ịnụ ụtọ mmanya n'èzí. Powder-ntekwasa ígwè brackets enyere nke a warara mmanya n'elu anọ ná nchebe megide mbara ihu okporo ígwè, na-eke dị nnọọ nri nke counter ohere na-enwe obi ụtọ hour al fresco. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ ntụpọ ị ga - achọ ka osisi ahụ bụrụ - osisi cedar nkịtị ma ọ bụ aja espresso — ma họpụta oche mmanya gị kachasị mma. ( Oghere nchekwa oghere oghere: Na-ahọrọ ụdị mpịachi ị nwere ike kpọgidere na mgbidi mgbe anaghị eji mmanya ahụ.)
Zụta ya ($ 172)
2. Jiri Ogwe Ndọtị Dọgharịa Drop-Ins
Mgbe oghere dị na ụgwọ adịchaghị mma, ịnweghị ike ịgahie na a Ogwe ndọba . Ogwe osisi nwere ike ijide iko, ihe nkpuchi, booze na ndị na-agwakọta, mgbe a kwaturu ọnụ ụzọ, ị nwere tebụl aka maka ịgba egwu. Ọ bụrụ na ịnọghị n’ime ụdị okike ahụ, gaa ọkara DIY na ogwe osisi a site na ịse osisi ahụ na ịgbakwunye obere akwụkwọ ahụaja na mkpịsị akwụkwọ n’ime ime ụlọ maka ịba ụba nke omume oge ọ bụla ị mepere ya.
Zụta ya ($ 90)
kacha mma ikuku ọcha osisi
3. Were ụgbọ ibu gị n’èzí
Nhọrọ ọzọ dị mfe: Debe ụgbọ ala n'èzí. Nwere ike wepu ya ebe ọ bụla ndị mmadụ na-achịkọta, wee tụgharịa ya n'ụzọ mgbe ịchọrọ obere ohere ịnabata gị Ja Ja Ding Dong Eurovision bụọ abụ . Ma ọ bụ, ị maara, ihe ọ bụla dị jụụ ndị mmadụ na-eme n'oge isi nri.
Zụta ya ($ 498)
4. Jiri nke oghere dị na ogige mpịachi
Ọbụna otu inflatable ọdọ mmiri na mberede na-eche ntakịrị chicer mgbe ọ na-positioned nso a curved Acacia osisi mmanya. O nweela obere ọnọdụ ebe okpomọkụ, na o nwere shelf nchekwa isii na shelf ite kalama atọ, ka ị nwee ike ịga mixicist zuru oke na nhazi a. Ma, mgbe oyi na-atụ nke ukwuu ị toụ ihe ọ drinkụ drinkụ n'èzí, ị nwere ike ịpịa ya ma bugharịa ya.
Zụta ya ($ 780$ 690)
5. Nabata Lot? Na-etinye aka na Ogwe zuru oke
Oh, yabụ ị bi ebe ebe anaghị snow? A makwaara gị na ị na-eji mmanya mmanya ejiri aka mechie ụbọchị ahụ, nke ịchọrọ ịmakụ n'akụkụ ọdọ mmiri? Nke mbụ, anyị na-ekwo ekworo. Nke abuo, ị nwekwara ike tinye ego na ụlọ mmanya zuru oke-ị ga-enweta ego gị n'ezie. West Elm's N'èzí Barlọ Mpụga emere site na mahogany na eucalyptus na-eguzogide mmiri (yabụ ọ gaghị agba ọkara ọkara site na nke mbụ ya ọkọchị na yad gị) ma gụnye shelf na-agbanwe agbanwe, ogbe karama, oghere kalama na igwe anaghị agba nchara ice na ị drinkụ bọket.
Zụta ya ($ 1,999$ 1,599)
6. Wụpụta Ogwe Pallet
Ọ bụrụ n'ịchọrọ afọ ojuju nke ịme ihe n'onwe gị (ma na-achọ itinye ihe na-erughị $ 1,600 na mmanya gị), gbalịa iji otu pallets rụọ otu. Nhazi a, nke sitere na Brit.co, dị mfe nke na ịchọghị ọkachamara-ma ọ bụ ọbụlagodi-ọkwa nka ịkwa nka iji mụta ya. Mana ọ ka dị mma achọ ịma ebube na njedebe.
7. Ma ọ bụ Jiri Niile Mee N'onwe Gị Tiki Ogwe
Ọ bụrụ na ị dị njikere maka ọrụ dị elu karị-oche a kwadebere, eriri na-ekpuchi ụdọ na ihe niile-lelee Houselọ House's DIY Treekee Bar. Akpọrọ aha osisi ahụ na mbara èzí ha nke kpaliri imewe ahụ, Ogwe pallet a ga-eme ka ọ dị gị ka ị nọ ezumike. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ ngọngọ site na etiti.
Nweta nkuzi Ebe a
8. Họrọ a Multi-Tasking Side Isiokwu
Have nweelarị ebe ezumike gị etinyere, ị chọghị ịme ụlọ mmanya gị ebe nlebara anya nke yad gị. Anyị na-anụ gị. Nke ahụ bụ ebe tebụl dị n'akụkụ a bara uru-ọ nwere ngwa nju oyi n'ime ya, yabụ ịnwere ike ijide mmanya ka ị chọrọ. N'eziokwu, nke a abụghị ntọala dị mma maka ndị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ ọdọ mmiri si-ọkọ piña colada, ma ọ bụrụ na ị rida na IPA ma ọ bụ mkpọ rosé, nke a bụ naanị ihe ị chọrọ.
9. Bugharịa ihe eji agba oyi
Tụlee nke a ụgbọ mmanya na-azọpụta gị ịme njem n'ime ụlọ na ngwa nju oyi. Ngwongwo a nke nwere okpukpu iri asatọ nwere ihe e ji eme ka ikuku dị n’ime ya, yabụ ị nwere ike ịchekwa ihe karịrị ite 100 — ma ọ bụ karama 50 — n’otu mgbe. Ihe mkpuchi ahụ na-emeghe, na -emepụta ohere mpempe akwụkwọ ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-agwakọta ihe ọ drinksụ drinksụ, otu akụkụ na-arụkwa dị ka osisi ịcha. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, e nwere iko ogbe iko n'okpuru oyi maka iko mmanya ụlọ, ihe mkpuchi karama na mkpuchi mkpuchi (yabụ okpu anaghị efe n'akụkụ elu gị niile) na ebe nchekwa maka ijide efere na nri .
ASLỌ LỌ ASLỌ ASLỌ ASLỌ ASLỌ JASMINE
10. Mepụta a 'onunu bonka'
Ọ bụrụ n ’ị rọrọ nrọ inwe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke dugara n’ime ụlọ zoro ezo dị ka nwata, ka anyị mee ka ị mata banyere omume toro eto gị: a Biersafe , aka onye n'okpuruala oyi. Ọ na-efu efu dollar iji rụọ ọrụ, na-eji thermodynamics nke ala iji mee ka ihe ọ beụgesụ dị jụụ, Jasmine Roth onye mmebe dere na ya blog , mgbe ọ wụnyechara otu n'ime ụlọ ọ dechara maka ezinụlọ dị na California. Mana nke ahụ abụghị ihe niile: Enwere ike zoo ya n'okpuru ite ifuru. Nke di egwu. Kwetara.
B ITTA ya (bido na $ 72)
Atụmatụ ịma mma dị mfe n'ụlọ
11. Mee Kachasị Mgbidi Mgbada
Know maara ka ọtụtụ ụlọ na-esi nwee windo n'elu sink nke na-ele anya n'azụ ụlọ ma ọ bụ patio? Debe mmanya a n'okpuru windo ahụ n'èzí. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike mepee windo ma nyefee mmanya. Daashi: The counter ịgbatị naanị 15 & frac14; sentimita asatọ — na oche ndị ahụ dị n'okpuru — n'ihi ya, ọ pụrụ ịba ọbụna oghere ndị kasị dịrị warara.
Zụta ya ($ 231$ 220)
12. Gaa Pro Ọkwa na a Concrete-topped Bar
Ka anyị bụrụ ezigbo: Ogwe a anaghị abịa ọnụ ala. Mana e wuru ya ka ọ dịgide. Ihe eji eme ihe nwere ike ihu igwe na ihe di egwu ma buru oke ka o gha abia, a na-emekwa ya site na osisi acacia a na-egbute nke oma (nke ndi oru nlekota oru igbo, BTW). Ndị na-emegharị ihe na-agbanwe agbanwe na ala pụtara na ọ ga-eme ka ị yourụ ihe ọ yourụ yourụ gị ọ bụrụgodị na oche gị enweghị ihe ọhụụ.
B ITTA ya($ 3,124)$ 2,186)
Njikọ: Ihe kachasị mma n'èzí n'èzí, dị ka ndị na-enyocha akwụkwọ si kwuo
Ihe ndozi ulo anyi:
Madesmart Expandable Cookware Guzosie
$ 30 Zụta ugbu a
Figuier / Fig Osisi Na-esi ísì ụtọ
$ 36 Zụta ugbu a
Eacho Chunky blanket
$ 121 Zụta ugbu a
Umbra Triflora Nzọụkwụ Planter
$ 37 Zụta ugbu a
Categories International Mma Gynaec
mmanu ojii maka ntutu
dermatologist kwadoro ngwaahịa ntutu isi
Mma Atụmatụ nke na-egbukepụ egbukepụ anụ ụlọ ịgba akwụkwọ
ndụmọdụ ndu maka uto ntutu ngwa ngwa
Uwe ejiji maka oke bust
ịhụnanya akụkọ ihe nkiri na Hollywood ndepụta
mmega n'ihi na ida afọ abụba